सुजित थापा, कलाकार - तीन प्रश्न - साप्ताहिक
सुजित थापा, कलाकार
सानै उमेरदेखिको कलाकार बन्ने चाहना राख्ने सुजित थापा यतिबेला पूर्णकालीन कलाकार बनेर आफ्नो सपना साकार गर्ने बाटोमा छन्। यती एयरलाइन्स पछि हाल डिस होमका व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत थापाले कलाकार बन्ने क्रममा राम्रै 'स्ट्रगल' गरेका छन्। मेरी बास्सैमा सीताराम कट्टेलले मौका दिएपछि उनले आधा दर्जनभन्दा बढी सिरियलमा अभिनय गरिसकेका छन्। मेरी बास्सै, घरबेटी बा, कलेज, सिस्नुपानी झ्याम्मै, दृष्टि आदि टेलिश्रृंखलामा अभिनय गरेका थापा अहिले शुक्रबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्यश्रृंखला 'भद्रगोल' मा व्यवस्थापकका साथै माने, इन्स्पेक्टर थापा आदि भूमिकामा प्रस्तुत भैरहेका छन्। गेटअप चेन्ज गरी-गरी काम गर्न मज्जा आउने थापाले बताए। थापासँग साप्ताहिकको तीन प्रश्न :
अभिनय संघर्ष कस्तो रह्यो ?
सानो उमेरदेखि नै कलाकार बन्ने सौख थियो। यसमै करियर बनाउने भूत सवार भएपछि मैले कलाकारिताप्रति चासो राख्दै गए। नाटकहरूमा अभिनय गरे। मेरी बास्सैमा जिगि्र हजुर (कुमार कट्टेल) सँगै अभिनय गरेपछि अहिलेसम्म विभिन्न टेलिश्रृंखलामा काम गरिरहेको छु। अहिले डिस होममा कार्यरत छु, तर कलाकारिताप्रतिको मोह पनि उत्तिकै छ। अहिले भद्रगोलको व्यवस्थापक छु। मुलुकको समसामयिक सामाजिक परिवेशप्रति व्यंग्य गर्ने यो श्रृंखलाको टिममा भने भद्रगोल नभएकाले राम्रैसँग काम भैरहेको छ। आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिकामा अभिनय गरेर आफुलाई पुष्टि गर्छु।
तपाईंले रेडियोकर्मीका रूपमा समेत काम गर्नुभयो होइन ?
मैले स्टार एफएम, क्लासिक एफएम तथा युथ एफएममा कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा काम गरें। व्यावसायिक हिसाबले विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम बनाएर म ती रेडियोमा प्रोगाम लिएर सञ्चालन गर्दै आएको छु। स्पोन्सरसिप बेसका ती कार्यक्रम कहिले कमेडी, कहिले सोसल त कहिले आन्तरिक पर्यटनसँग सम्बन्धित हुन्थे।
पूर्ण रूपमा कलाकार भएर बाँच्न सकिने अवस्था कत्तिको छ ?
अहिले कलाकारकै रूपमा बाँच्न सकिने रहेछ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ, तर त्यसका लागि मेहनत, लगनशीलता, क्षमता, भाग्य र सिजनशीलताजस्ता कुरा आवश्यक हुन्छन्। म आफू पनि कलाकारकै रूपमा बाँच्न सक्नुपर्छ भनेर सक्रिय छु। मलाई लाग्छ, अब समय आएको छ, यो क्षेत्रमा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउने। भद्रगोललाई अझ लोकप्रिय बनाएपछि आफ्नो कन्सेप्टमा पनि केही काम गर्छु।